साउदीमा पसिना बगाएर कमाएको सम्पति कु’म्ल्यार श्रीमती फ’रार, श्रीमान रुँदै मिडियामा’ -
काठमाडौं। श्रीमानले साउदीको ५५ डिग्रीको घाममा पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पति कुम्ल्यार परपुरुषसँग संगै लियर श्रीमती प्रमिला,भागिन श्रीमान रु’दै मिडियामा श्रीमा’नले विदेशमा कमाʼएको सुन र पैसा बोकेर चितवनकी एक महिला स’म्पर्कविहिन भएपकी छिन ।
भरतपुर महानगरपालिका १३ उज्वʼल नगरकी २८ वʼर्षीय प्रमिला सुनार एक महिʼनाअघि देखि सम्पर्क विहिन बनेकी हुन । उनले दुई लाख नगद, दुई तोला सुनसहित बैंकको सम्पुर्ण कागजात लिएर सʼम्पर्क विहिन बनेकी उनका श्रीमान सʼन्तोष सुनारले बताए ।
वैदेशिक रोजʼगरीमा रहेका सन्तोष श्रीमती सʼम्पर्कविहिन भएपछि अहिले घर फर्किका छन । उनका श्रीमती मंसिर २४ गत्तेदेखि सम्पʼर्कविहिन भएकी हुन । १ महिना पुग्न लाग्दा पनि सम्पर्क हुन नसʼकेपछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा खोजिदिन निवेदन दिएका छन ।
थप अनुʼसन्धान भईरहेको प्रहरी प्रवक्ता एक नारायण कोइरालाले बताए । परिवारका अनुसार नगद, गरʼगहनासहित सम्पर्कʼवि’हिन भएकाले दोस्रो विहे गरेको आशंका छ । प्रमिलाका ११ वर्षीय छोरा र ९ वर्षकि छोरी पनि रहेका छन । प्रमिला सम्पर्कविहिन हुनुभन्दा पʼहिले घरमा एक जना मान्छे घरमा आउने, जाने बस्ने गरेको छोरोले भनेको सन्तोषले बताए । विʼदेशमा कमाएको सवै सम्पत्ती लिएर हिडेपछि सन्तोष तʼनावमा रहेका छन ।
हेर्नुहोस पुरा यो भिडियो:
संक्रमण रोक्न काठमाडौंलाई तत्काल सिल गर्न मेयर शाक्यको सुझाव
मुकुन्दले भेटाए प्रेमिका, मंसिरमा घरजम गर्ने तयारी ! (भिडियो)
बच्चा जन्मेको २ घण्टा नबित्दै झाडिमा फालियो, १७ बर्षको युवतीले यस्तो किन गरिन् ? (भिडियो)
भाग्य न्यौपानेलाई ठुलो झ’ट्का: भाग्यबिरुद्ध मु’द्दा दर्ता गर्दा जे देखियो … (भिडियो)
पाँचजना अब्बल प्रतिस्पर्धीहरुको धमाकेदार प्रस्तुति, नेपाल आइडल आजको ३०औं भाग हेर्नुहोस
नेपाल आइडल सुरु: कसले पाउनेछ वाइल्ड कार्डमार्फत पुनः प्रवेश ? हर्नुहोस आजको २९औं भाग
गाईजात्रा: यसरि उडाए दुइ क्याप्टेनले जहाज (भिडियो)